Mmekọahụ Mmụta Oge 3: Rebọchị Mwepụta, Nkedo, Trailer Na Ihe Anyị Maara - 【Nkọwa】
Akụkọ & Mmelite
TOP. 1. XNUMX
Enweghị ihe jikọrọ
Mmekọahụ Mmekọahụ oge 3: ụbọchị ịhapụ, nkedo, ihe na-adọkpụ, na ihe anyị maara
Igwe onyonyo | 0 Comments
Otu n'ime ihe kacha mma Netflix kacha mma na-alaghachi na mmepe nke Monster Streaming: Mmekọahụ Mmekọahụ oge 3, anyị na-echekwa ihe nkiri ahụ ịmalite ịmalite ịgba egwu, hapụ naanị inye anyị ụbọchị mwepụta. Mmepụta bidoro tupu afọ a, mana ebugharịla n'ihi ọgba aghara coronavirus. Agbanyeghị, ọ dị ka nkwadebe na-amalite maka ịmaliteghachi eserese, anyị na-atụkwa anya ịhụ ihe ọchị ọchị Britain a hụrụ n'anya nke ukwuu laghachi na Netflix na 2021.
Ntọala n'ime obodo nlekọta Welsh mara mma, Mmụta Mmekọahụ na-enyocha ndụ, ịhụnanya na nsogbu mmekọahụ nke ụmụ akwụkwọ, ndị nne na nna na ndị nkuzi. N'ime oge abụọ a, ndị na-egosi ihe ngosi a na-egosipụta n'ụzọ dị egwu, dị ka Mmekọahụ Mmekọahụ na-enyocha ọtụtụ isiokwu na-emetụ n'ahụ.
N'okpuru, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Mmekọahụ Mmekọahụ Oge 3, gụnyere ụbọchị ọ ga-ewepụta ya, ihe nkedo ahụ, ebe anyị chere na akụkọ ahụ ga-esote. Ndi Otis mechara kwusi igbu oge ma merie obi Maeve? Ndi Eric ye Adam ẹyekabade ẹdi n̄kpọ? Ndị na-apụnara mmadụ ihe na-esochi.
Isiokwu nke ọdịnaya
1 Mmekọahụ Mmụta Oge 3 Hapụ Datebọchị Amụma: 2021?
2 Mmụta Mmekọahụ Mmekọahụ Oge 3 Trailer: A Peek Peek Of What to Expect Next Year
3 Mmekọahụ Ed Season 3 Cast: Donye Ka Anyị Na-atụ Anya Returnlaghachi
4 Mmekọahụ Mmekọahụ Season 3 akụkọ: ihe ị ga-atụ anya site na usoro ndị ọzọ ga-esochi
5 Mmụta Mmekọahụ bụ otu n'ime ihe ngosi kacha mma na Netflix
Mmekọahụ Mmụta Oge 3 Hapụ Datebọchị Amụma: 2021?
Anyị na-atụ anya ụbọchị ntọhapụ maka Mmekọahụ Ed Season 3 ka ọ bụrụ mmalite 2021, dabere na ogologo usoro usoro ihe nkiri eserese ugbu a metụtara nsogbu ahụike. Ihe nkiri ahụ malitere ịse vidio mana, dị ka ọtụtụ ndị ọzọ, ka eyigharịrị ya n'ihi coronavirus. Oge ịse ihe nkiri na-agba ọsọ na 2020 ka a ga-agbaso usoro a n'oge ogologo oge ọkọchị Britain.
Kedu, dabere na akụkọ ngwụcha July 2020, yiri ka ọ bụ ikpe. Sony na ndị na-eme ihe ngosi ahụ na-enwe ọganihu na nkwadebe iji gbaa ọzọ ma mepụta usoro iwu dị mkpa. Ekwuru na ndị na-eme ihe nkiri ga-edebe ụbọchị ọdee nke August na akwụkwọ ndekọ ha. N'ime akụkọ na-esote site na imecha, ụlọ nne na nna iri na otu Sony Pictures Television kwuru na ọrụ na-aga n'ihu ma ndị na-emepụta ọrụ na-arụ ọrụ na usoro nchekwa usoro ọkọlọtọ na njikere ịmalite eserese.
Gọọmentị UK kwere ka TV na ihe nkiri vidio maliteghachi na Mee, ma ọ bụrụ na ndị na-emepụta ihe wepụtara atụmatụ nchekwa zuru oke. Otú ọ dị, kọntaktị dị mkpa na mmekọrịta chiri anya nke Mmekọahụ Mmekọahụ ga-enwerịrị dịka akụkụ nke ihe ngosi ahụ ga-eweta isi ọwụwa.
Mmụta Mmekọahụ Mmekọahụ Oge 3 Trailer: A Peek Peek Of What to Expect Next Year
Ka anyị kwuo gbasara mmekọ nwoke na nwanyị, ka anyị kwuo maka oge 3 (nke Mmụta Mmekọahụ) pic.twitter.com/qvRIiXwp9B February 10, 2020
N'ụzọ dị mma, Netflix yiri ka ọ ghọtara n'ụzọ ziri ezi otú akpịrị na-agụ agụụ Mmekọahụ Mmekọahụ maka usoro ndị ọzọ, iyi ahụ kara ọkwa oge mmeghari ohuru nke oge 3 na ụgbọala na-adọkpụ. Dị ka nke mbụ ụgbọala na-adọkpụ maka oge 2, nke gosipụtara Gillian Anderson na-ebugharị okwu mkparịta ụka sultry na uru nke mmekọahụ ed, nyocha maka oge 3 bụ Groff, onye protagonist nke Alistair Petrie.
Anyị na-ahụ onye isi na-agbachi nkịtị na-ejegharị n'ụlọ nzukọ nke Moordale High, na-agafe eserese nke isi ihe gbasara Mmekọahụ Ed ka ọ na-ele anya ihe ọdịnihu ga-adịrị onye ọ bụla n'ime ha. Ihe ụgbọala na-adọkpụ ahụ na-akwụsị iji ịkpọ oku ka ịmatakwu banyere Mmekọahụ Ed Season 3, mana kwụsị tupu ụbọchị ntọhapụ kwesịrị ekwesị.
Mmekọahụ Ed Season 3 Cast: Donye Ka Anyị Na-atụ Anya Returnlaghachi
(Ebe E Si Nweta Foto: Netflix)
Ọ bụ ezie na ekwenyebeghị ndepụta nkata maka oge atọ, anyị nwere ezigbo nchekwa iche na ihe odide ndị egosipụtara na vidiyo teaser ga-alaghachi azụ.
Usoro 'na-eduga bụ Asa Butterfield (Otis Milburn) na Gillian Anderson (Dr. Jean Milburn), tinyere akụkụ dị mkpa nke ndị na-akwado nkwado, gụnyere Emma Mackey (Maeve Wiley), Ncuti Gatwa (Eric Effiong), Connor Swindells (Adam Groff) na Patricia Allison (Ola Nyman). Nyere otu oge nke 2 gbadoro ụkwụ na usoro nkọwa izugbe, ọ ga-esiri ike iche n'echiche usoro nloghachi ahụ na-enweghị ọtụtụ ndị ọrụ nkedo ọrụ ha.
Anderson tweeted banyere Mmekọahụ Ed Season 3 na enebọchị Ọhụrụ (rịba ama usoro ndị dị n'uko dị n'elu ya):
Ka ahụ oge n'adịghị anya ?? @ sexeducation S3 pic.twitter.com/sdONgVmzVQ Febụwarị 10, 2020
Mmekọahụ Mmekọahụ Season 3 akụkọ: ihe ị ga-atụ anya site na usoro ndị ọzọ ga-esochi
Onye na-ede akwụkwọ na onye edemede Laurie Nunn bụ onye na-arụsi ọrụ ike na edemede maka oge nke atọ ogologo oge tupu Netflix emezigharị usoro ahụ.
N'ajụjụ ọnụ LADbible, Nunn na-atụle usoro ihe omume ngosi ahụ siri ike, na-arịba ama na usoro nke ide oge ọzọ tupu mmeghari ohuru achọrọ dị mkpa iji na-arụ ọrụ telivishọn. Mgbe ajụrụ ya gbasara ike akụkọ ga - eme n’ọdịnihu, Nunn kwuru, sị, “Ọ masịrị m ịde mkpụrụ edemede ndị a. Ọ bụ nnukwu set ma echere m na isiokwu ngosi a, n'ihe gbasara mmekọahụ na mmekọrịta, na-enye akụkọ na-enweghị njedebe. "Ohere."
Oge nke abụọ nke Mmekọahụ Ed wepụrụ uche ya na Otis ma họrọ ịhọrọ ịgbazinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge dị ukwuu nye ndị agwa dị iche iche magburu onwe ya gbara ya gburugburu. Ihe ngosi intaneti ohuru Eric (Gatwa) eritela uru kachasị na ngbanwe a na usoro ngosi ahụ, na-enye ohere maka nhụjuanya na mkpasu iwe na mgba nke nwa okorobịa queer ojii. O doro anya na ewu ewu ya adabaghị na ịdọ aka ná ntị, ebe ọ bụ na vidiyo nke teaser maka oge nke atọ na-elekwasị anya na ọ ga-eme ka ọhụhụ ya na onye mbụ ya bụ Adam.
Mgbe ọ na-edebe akụkọ dị ala na akụkọ SEX Season 3, Butterfield gwara Digital Spy na ọ "nwere obi ụtọ n'ezie" na ihe omume mbụ na ọ "abụghị ebe m tụrụ anya ya." Ọ gbakwụnyere, sị: “thingsfọdụ ihe agbanweela. Obi dị m anụrị. “Anyị na ya sokwa mgbe ọ sịrị‘ Achọrọ m karịa Otis na Maeve. Mmekọrịta na-agaghị-ha-abụ ha na-enwe nkụda mmụọ ịhapụ Otis ịhapụ ozi ịhụnanya na-egbu egbu na igwe nzaghachị Maeve, dịka ọ dị ka ọ hụrụ onye agbataobi ya n'anya, Isaac
N'ezie, Eric abụghị naanị nwata akwụkwọ nwere ịhụnanya na ụbụrụ ya. Oge na-adịghị agafe agafe "ha dị mma, nri?" Gba egwu n'etiti Otis na Maeve (Mackey) yiri ka ọ na-achọ ịkwụsị. Ihe ngosi nkewa nkewa nke oge nke abụọ hụrụ Otis kwupụtara ịhụnanya ya nye Maeve na ozi olu, ọ ga-ehichapụ ịhụnanya ọhụrụ Maeve tupu ọ nụ ya.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ Fans katọrọ akụkọ a dị ka mgbakwunye mgbakwunye nke ụdị nsogbu ịhụnanya onye a na-enwe ugbu a, onye isi ihe nkiri a na-ezere mmeghari ọ bụla. Na mkparịta ụka ya na BT, Ben Taylor kwuru, sị: 'Echere m na a ga-atụba akpụkpọ ụkwụ na ihuenyo. Na ezi ụzọ. Enwere m obi ụtọ na ha tinyere m ihe. I chere na ị chọrọ ya, ma ị chọghị ya. Emela ihe ".
Enwere ọtụtụ ụmụ nwoke ndị nwere nkedo na-akwado nke a ga-eburu na Oge nke 3 nke Mmekọahụ Ed. John gwụchara oge nke abụọ site na iji obi ụtọ mee ka mmekọrịta chiri anya ya na onye ya na ya na-amụgharị, Jakob, n'ihi ọbụbụenyi ha. ya na nne ya gbara alụkwaghịm bụ Adam Maureen. N’ebe ọzọ, ụmụ akwụkwọ dị iche iche na-agba mgba ugbu a na mkpughe banyere njirimara na ebe ha nọ n’ụwa ka ha na-agbagide nsogbu nke nsogbu mmetọ mmekọahụ, njirimara na-enweghị atụ, na ọdịnihu dị n’ihu.
Mmụta Mmekọahụ bụ otu n'ime ihe ngosi kacha mma na Netflix
Na-agwa Hollywood Reporter banyere ihe ngosipụta ọdịnihu, Nunn nwere obi ụtọ banyere ebe ya na ndị edemede ya nwere ike mejupụta nkedo eclectic. “Ihe odide ndị a ... ha nwere ụkwụ. Echere m na m nwere ike imekwu ihe na ha ma ọ bụrụ na enyere m ohere, ”ka o kwuru. "[Netflix] na-akwado ma na-achọ n'ezie ka anyị kọọ akụkọ ndị anyị nwere mmasị na ya. O yiri ka anyị niile nọ na ibe, na-achọ ime otu ihe ngosi. »
Nke a bụ atụmanya na-atọ ụtọ maka ngosipụta nke ọtụtụ ndị na-eto eto nwere ikike n’ihu na n’azụ igwefoto. O siri ike ịhụ ihe kpatara mmekọahụ ed ji nwee mmetụta dị otú ahụ na ndị fan. Ọ na-enye nlebara anya na enweghị nnabata banyere nsogbu ndị ọ bụghị naanị ndị nọ n'afọ iri na ụma na-eche ihu, kamakwa site na ọtụtụ ndị toro eto ka na-abịakwute mmekọahụ ha. Ihe odide nke Nunn dị oke nkọ, yana mmemme mmemme ahụ na-eme ya nnukwu mgbakwunye na ọbá akwụkwọ Netflix na-eto eto nke akụkọ na mgbasa ozi na-aga n'ihu.
Weta na oge 3.
Kekọrịta nke a:
Nke a masịrị m:
Ọ masịrị m ya Nabata ...
Akụkọ na-ewu ewu
A %d ndị na-ede blọgụ dị ka nke a: